Home Wararka Qarax ismiidaamin oo ka dhacay caasimada Muqdisho
Qarax ismiidaamin oo ka dhacay caasimada Muqdisho
Khasaaro kala duwan ayaa ka dhashay qarax ismiidaamin oo Sabtida maanta ah ka dhacay degmada Dharkenlay ee magaalada caasimada ah ee Muqdisho.
Weerarkan lagu tuhunsan yahay maleyshiyada Al-Shabaab ayaa si gaar ah waxaa looga soo wariyey goob gaadiidka laga raaco [Boosteejo] oo ku taala xaafadda Macalin Nuur.
“Ismiidaamiyaha wuxuu isku dhex-qarxiyey dad shacab ah. Khasaaraha wali lama tirokoobin balse waxaa muuqaneysa in uu badan yahay,” ayay sheegeen illo wareedyo kala duwan.
Balse, warar horudhac ah ayaa intaas ku daraya in saddex qof ay ku nafwaayeen weerarka ayna ku dhaawacmeen lix kale kuwaasoo loola cararay goobaha caafimaadka si loo daaweeyo.
Goobjoogeyaal ayaa u sheegay warsidaha Garowe Online in goobta qaraxu ka dhacay ay ku dhow-dahay fariisin ay leeyihiin ciidamadda Soomaaliya taasoo waqti xaadirkan ah mid xiran.
“Goobta qaraxu ka dhacay waxay sidoo kale ku dhow-dahay isgoyska Ex-kontarool Afgooye. Maadaama saxmad badan ay jirtay, si dhab ah looma ogga hadafka,” ayuu yiri goobjooge.
Boosteejada qaraxu ka dhacay ayaa waxaa laga raacaa gaadiidka aada degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose – taasoo magaala madaxda Muqdisho u jirta qiyaastii 30 kilomitir.
Previous article[Sababta] Maamulada Taageersan Farmaajo aanay weli u gudbin magacyada Guddiga
Next articleQaraxyada Shacbiga lagu Laaynayo Xelligaan Doorasho waa Heshiis ka Dhaxeeya NN Iyo Shabaabka.
Milatariga Suudaan oo inqalaabay MW Bashar Al Asad (Deg Deg)
Rooble oo ku adkeysanaya qabashada doorashada Somaliland oo la isku heysto